Ungazi kanjani ukuthi indoda isikhathele nguwe | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 12/11/2021 23:14 | Izithandani Nezocansi
Ebudlelwaneni obuningi owesifazane angase ahlangabezane nokungaqiniseki uma umuntu wakho ekhathele ngesibopho sabo njengombhangqwana. Akukho okunye okubuhlungu uma kusekhona imizwa futhi nakuba ungalokothi unikeze isinyathelo sokubuza, ukhetha ukulinda ukuthi konke kuzoxazululwa kanjani.
Ukuntuleka kwesithakazelo kwesinye sezingxenye zombhangqwana kungaba ngenxa enkulu monotony noma ukungabi nesithakazelo. Into embi kakhulu yilapho ubuhlobo buhlala isikhathi eside ngoba angeke buphuke ikakhulukazi ngenxa yokunamathela okukhulu. Lapho owesifazane engase ahlupheke ngenxa yomuntu ongaphindiselwe, kufanele alinganisele dala futhi uphathe uthando lwakho. Ngakho-ke, kufanele uhlukane nalowo muntu ongakuthandi.
1 Singakwazi kanjani ukuthi indoda akasathandi ubudlelwano
1.1 Ukuthintana ngokomzimba kulahlekile
1.2 Akanandaba futhi akanandaba nezinkinga zakho
1.3 Ingabe lento oyenzayo iyamphazamisa?
1.4 Akathembekile kulokho akuzwayo
1.5 Akasawenzi amacebo nawe
1.6 Uma nihlangana nizophuma uyabhoreka
Singakwazi kanjani ukuthi indoda akasathandi ubudlelwano
Inkulumo-mpikiswano ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili zamaqiniso. Singakwazi ukwazi uhlobo lobudlelwano babantu ababili lapho bengahlali ndawonye, ​​kodwa balondoloze ubuhlobo bokuthandana. Noma singahlangana ubudlelwano obuzinzile nobuvikelekile eminyakeni eminingi futhi lapho okubili kuhlalisana ngaphansi kophahla olufanayo. Ngaphambi kwalezi zinhlobo ezimbili zobudlelwano singathola leyo ndoda ikhathele ukwabelana ngothando lwayo kumbhangqwana wakho. Kulokhu, abesifazane bangakwazisa lokhu kungathandeki ngochungechunge lwamathiphu ukuze ukwazi ukubona lezo zimpawu.
Ukuthintana ngokomzimba kulahlekile
Akukho othintana naye noma isivele ilahleka. Impela eyakho ukusondelana embhedeni kwehlise izinga, kokubili ngentshiseko ngekhwalithi nangobuningi. Manje ukuhlangana kuyenzeka ngezikhathi ezithile futhi akusashubi njengasekuqaleni. Ungaqiniseka uma ekufunela ucansi kuphela futhi uthando ayelunikeza kuwe selubanda kakhulu.
Akanandaba futhi akanandaba nezinkinga zakho
Manje akasakuthembi ukuba wenze umsebenzi wakhe wesikole, njengoba ehlale enza. Ibanga seliqalile ukubonakala futhi akanciki ehlombe ukukutshela ukuthi wenzeni emini. Kodwa akuyona nje le mininingwane kuphela, owesifazane ufuna induduzo futhi utshela uhlobo oluthile lwenkinga ahlangabezane nayo futhi. akezwakali. Indoda ayikhethi kakhulu futhi ayisaziniki ukubaluleka kwezinkinga zobudlelwano, nakuba zibalulekile kuye.
Ingabe lento oyenzayo iyamphazamisa?
Esinye isizathu esingabonisa ukungabi nasithakazelo kwabo yilapho cishe yonke into oyishoyo noma oyenzayo ibakhathaza. Ingxoxo ingakwazi bagcine ngokulwa kancane, kukhona ukuphambana kwemibono futhi kuba nokushayisana noma nini. Kungase kube esinye sezizathu ezicacile ukuthi ufuna izaba ukuthethelela ukuqhelelana kwabo.
Akathembekile kulokho akuzwayo
Lena enye inkinga engase iphakame. Indoda ingaba indawo yokuphila, funa induduzo yakho futhi ungabe usathandana nesithandwa sakho. Ukwethembeka nokusho ukuthi awusezwa lutho ngeke kwenzeke. Bazokuqamba amanga uma inhloso yabo kuwukukhombisa ukuthi baphelelwa yintshisekelo ngokuhamba kwesikhathi.
Akasawenzi amacebo nawe
Hlala ubalekela noma yiluphi uhlelo okufanele kwenziwe njengombhangqwana noma okungenani, cishe wonke umuntu. Uzobeka izaba njengokuthi ukhathele noma umdinga isikhala, kodwa okubi kakhulu uma kuhlongozwa okuthile ngaphandle anganqabi. Uma kungekho ukuhlalisana, kungaqashelwa nini akasakufaki ezinhlelweni zakhe, ohlale enezinto azenzayo noma oneshejuli ebambene kakhulu.
Uma nihlangana nizophuma uyabhoreka
Uma uqaphela ukuthi unesithukuthezi emihlanganweni yenu muva nje, akulona uphawu oluhle. Kakade Awunayo ngisho nengxoxo emnandi noma konke omtshela kona kubonakala kuyisicefe. Ngaphezu kwalokho, kungachazwa ukungabi nentshisekelo yakho Uma ebuka wonke umuntu ngaphandle kwakho, ubheka ngisho nabanye abantu besifazane.
Uma umuntu ekuthanda usuke ebheke nje ukwabelana nawe ngazo zonke izikhathi zakhe, ngoba uyakukhumbula futhi ecabanga kakhulu ngawe. Uma lowo muntu ebeyisithombe esiphelele futhi uqala ukuqaphela ukuthi indlela abasabela ngayo kuwena ayilingani, kufanele uqaphele ukuthi kukhona ukungafani.
Okokuqala, kufanele wenze lokho izosabela kunoma yikuphi ukuphawula kwakho, ukuthi uqaphela ukuqhelelana nokuthi uma kungalungiswa kusho ukuthi ulahlekelwa nguwe. Uma eqotho futhi ekutshela ukuthi ukhathele nguwe, akukho okunye ongakwenza lapha. Kodwa mhlawumbe awukaqapheli lelo banga futhi awukwazi lokho ibangela ikhefu. Kuleli qophelo le nkinga ingalungiswa
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ungazi kanjani ukuthi indoda isikhathele nguwe